राष्ट्रिय एकताको ओजस्वी इतिहास
इतिहासका पानामा आजका लागि पनि उत्तिकै कालजयी गुण र एकतासँग अङ्कित नाम हो– पृथ्वीनारायण शाह । राष्ट्रिय एकताको शङ्खघोष त्यतिखेरै भयो जतिखेर पृथ्वीनारायणको पराक्रमी वीरताले विजयोत्सव मनाएको थियो । राष्ट्रिय विभूति शाहद्वारा प्राप्त भएको सिङ्गो राष्ट्रिय स्वाधीनताको मूल्यलाई एक सच्चा राष्ट्रभक्तले बिर्सने कुरै रहँदैन । इतिहाससँग रमाउन न त व्यक्तिगत स्वार्थको पुन्तुर बाँधिनु उचित हुन्छ न त अपव्याख्याका कनिकुथी भाव नै बलवान बन्छन् । बाइसे–चौबीसे राज्यमा विखण्डित देशलाई एकीकरणको मालामा उनेको महान् इतिहासलाई छायाँमा पारेर आक्रमणकारी युद्ध पिपासुको लाञ्छना लगाइनु पुर्खाको पसिना, गौरव अनि धरोहरलाई गिज्याएको पनि हुन सक्छ, सोचनीय विषय हो । समय सापेक्षी ढङ्गले दूरदृष्टि राखेर टुक्रे भावनालाई एउटै स्वरूप दिँदै अखण्ड सार्वभौम राज्यनिर्माण गर्नु कुनै केटाकेटीको खेल अवश्य होइन । सुदृढ नेपाल राज्यको परिकल्पनाभित्र कति योद्धाले रगत बगाए होलान्, त्यो समय नै त्यस्तै रहेछ जसमा युद्ध कौशलता उच्च थियो । यत्रो विशाल कार्यमा कमजोरी त भए होलान् नै तथापि हामीले स्वतन्त्र राज्यका स्वाधीन नागरिकको पहिचान पाउनुसँग गर्व गर्नु पर्दैन र ! जतिखेर भ्रष्ट्राचारीका खुट्टा काँप्थे । समयानुकूल विकासको दैलो खोल्न कुनै कञ्जुस्याइँ भएको थिएन ।
प्राचीन समयमा बनेका दरबार, मन्दिर कैयौँ ठूला–साना भूकम्पसँग झुकेनन् । विज्ञान र वैज्ञानिक सोचमा हाम्रो देश त्यो समयमै कति सक्षम रहेछ, जतिखेर अङ्ग्रेज स्वार्थी सोच नै त्राहीत्राही भएको थियो । स्वाभिमानको उच्च रक्षा थियो– व्यक्तिगत स्वार्थ इतिहासमा जति थियो, त्योभन्दा कम छैन आज । इतिहासको अपव्याख्या गरेर मपाईत्व छाँट्दै गर्दा वीर पुरुषका रगतमा मुछिएको आधुनिक नेपाल निर्माण र राष्ट्रिय एकताको इतिहाससँग आज विखण्डनकारी सङ्कुचित विचारमा हामी मुछिएको पीडा छ । तसर्थ ‘पृथ्वीनारायण’ कुनै व्यक्तिगत निधि नभएर हाम्रा पुख्र्यौली धरोहर, अजेय इतिहास र प्रेरणाप्रद नेपाली एकताको गौरवमय नाम हो ।
इतिहासका कतिपय विषय समयान्तरसँगै झुठा र अपाच्य बन्छन् र बन्दै जानेछन् पनि । आज हामीले सत्य भनेर कोरिएका नियम कानुन भोलिको इतिहासका लागि अपाच्य बन्न सक्छन् तर हिजो पृथ्वीनारायण शाहले नेपाली जनतालाई ‘चार जात छत्तीस वर्णको पूmलबारी’ भनेर दिनुभएको अभिव्यक्तिमा जति प्रेम र एकता थियो त्यति आजका मागमा छभैmँ पनि लाग्दैन ! भर्खरैको सशस्त्र द्वन्द्वले जनतालाई सैद्धान्तिक रूपमा कागजमै अड्काएर दिएका उपलब्धिसँग तौलेर, मानवअधिकार उल्लङ्घनसँग जोडिएका तीता विषय बिर्सदै सिङ्गो राष्ट्रको अखण्डताका ऐतिहासिक व्यक्तित्व पृथ्वीनारायणलाई मूल्याङ्कन गर्न पूर्वाग्रह राख्नुसँग अहम्वाद गाँसिएभैmँ लाग्छ । भावी पिँढीले हामीलाई औँल्याएर यसो पनि भन्ला– हाम्रा पछिल्ला पुर्खाले सिङ्गो देशभन्दा साँघुरो सोचभित्रै आफूमै लडाइँ गरे, हाम्रा लागि उज्ज्वल बाटो खन्नै सकेनन् । गफ छाँटे, काम गर्न सकेनन् । भ्रष्टाचारी बने तर मुलुकको गरिबीमा आँखा लगाएनन् । हो त्यतिखेर हाम्रा आजका विचार थोत्रा, असक्षम र स्वार्थी साबित हुनेछन् । त्यहाँ न त जातको सवाल होला न त सानो राज्यका बीच गर्ने झगडाको ।
गोर्खाका राजा नरभूपाल शाहको देहवसानपश्चात् पृथ्वीनारायण शाहले २० वर्षकै उमेरमा राजदण्ड सम्हालेर राज्य एकीकरणको दर्विलो राजत्वको स्थायी रेखा कोर्नुभयो । आधुनिक नेपालको मानचित्र बदल्ने ऐतिहासिक अभियानको प्रारम्भिक इतिहासलाई वि.सं. १८०१ मा प्राप्त नुवाकोटको विजयले आरम्भ ग¥यो । तत्कालीन छिमेकी राज्य लमजुङ र कास्कीसँग मित्रताको हात पैmलाउँदै हातहतियार तथा सैनिक सुधार गर्ने रणनीतिको सबल प्रयास थियो– नुवाकोटमाथिको विजय । मकवानपुर विजय, कीर्तिपुरसँग तेस्रो पटकको प्रयासबाट मात्रै जालझेलबाट प्राप्त विजय होस् या मिरसिक्का अभियानमा देखाइएको वीरता, आखिर त्यहाँ गोर्खाली शान र स्वाभिमानको इतिहास छ । कीर्तिपुरको युद्धमा काजी कालु पाण्डेजस्ता शूरवीर व्यक्ति मारिए, जयन्त रानाले निर्मम रूपमा छाला काढिएर मर्नुप¥यो, शूरप्रतापले कानो हुनुप¥यो । यही क्रोधाग्निको प्रतिकारमा पृथ्वीनारायणद्वारा धेरैको नाक कान काटेर बदला लिएको भन्ने गरिए पनि इतिहासकारहरूको मतमा यी नेपालबाट निस्कासित क्रिस्चियन पादरीहरूद्वारा गरिएको अपव्याख्या थियो । आफ्नो अभीष्ट अभियान असफल पारिदिएका राजाविरुद्ध दुष्प्रचार उनीहरूबाट हुने नै भयो । उपत्यकाबाट अङ्ग्रेजको राजनीतिक कुचाला लघारियो । उपत्यकासँगै पूर्वका सेन राज्य चौदण्डी र विजयपुर क्षेत्र नेपालमा गाभियो । फलतः किराँत र लिम्बूवान प्रदेशका राजाले गोर्खाली झण्डामुनि एकैसाथ बस्ने अपेक्षा बोकेर आत्मसमर्पण गरे । तबदेखि ‘मेरा साना दुःखले आज्र्याको मुलुक होइन । सबै जातको पूmलबारी हो’ भन्ने महान् अभिव्यक्तिसँग हामीले स्वाभिमानको उच्चतामा रम्न पाइरहेका छौँ । सैनिकले कदर पाए । कालु पाण्डे, कीर्ति शाह, तुलाराम पाण्डे, रामकृष्ण कुँवर, केहरसिंहजस्ता योद्धाले यो सङ्ग्रामको महायज्ञमा दिलोज्यान दिए, एकीकरणको सपना साकार पार्नका निम्ति कसुर छाडेनन् । स–साना राज्यलाई एक्लैले डोल्याएपछि अङ्ग्रेजको सपनामा भेलबाढी आयो त्यसैले त आज हामी छौँ । त्यसैले त एकीकरणका भावसँग कवि सुवानन्द दासको कवित्व पोतियो–
विश्वको नक्सामा सानो नेपाललाई खोज्न लाग्दा सगरमाथाको चुम्बकीय शक्तिले ध्यान खिच्छ । एसियाको मुटु हो नेपाल, चाहे उत्तरमा हिमालको अजेय खम्बाबाटै शितलता प्रवाह होस् या पहाडका हरियालीसँग तराईका फाँटले लुकामारी खेलून्– यहाँ अटुट प्राकृतिक चाञ्चल्य स्वभाव छ । मनसुनी हावामा रम्छ, भूपरिवेष्ठित देशले चिनिन्छ, जलाशयको खानी, सौन्दर्यकी रानी, अन्नको भण्डार सबै नेपाली स्वाभिमानका स्वर्णाक्षरित नाम हुन् । हरेक विदेशी फिरन्ताले यहाँको प्राकृतिक चाञ्चल्यसँग थुक निल्दै अटुट प्रेमको गाँठो कस्छन् । बहुजातिका परम्परा, भेष र पर्वका एकताको शृृङ्गारमा स्वर्गले आफ्नो स्वरूपलाई बिर्सन्छ । यहाँ कृत्रिमताविरोधी भाव छ त्यसैले संसारको दौलत नेपालका लागि नगन्य बन्छ । आखिर कसैले त जोड्यो यो भूगोललाई ! आज विश्व समुदायले इतिहासका यस्ता अमर नामलाई सलाम गर्दैछ भने यो गौरवसँग हामीले रमाउन पाउनु अवसर होइन र !
आज संसारको एउटा बिन्दुमा नेपाल नामक देश छ किनकि यहाँ पृथ्वीनारायणको एकीकरण र दूरदर्शी पौरखको गर्विलो विगत छ । २६ वर्षसम्म अनवरत युद्धभूमिमा होमिएका एक पुर्खाको जीवनीसँग नेपाली माटोको अटुट नाता छ । उहाँका “प्रजा योग्य भए दरबार बलियो हुन्छ । जनताले मन पराएको व्यक्तिलाई काजी दिनुपर्छ” भन्ने भावसँग राष्ट्रिय एकता मुखर हुन्छ । उहाँका सामाजिक, न्यायिक नीतिसँग विज्ञानको जादु छ । घुस लिने र दिने दुवैलाई कठघारामा उभ्याइनु, जात विशेषले कर्म गर्न पाउने स्वतन्त्रता पाउनु, अदालतको पैसालाई दरबारमा हुल्न नचाहनु अनि जोगी, साधु, गरिबप्रतिको आदरभावले आसन पाउनुमा मानवता, स्वतन्त्रता, समानता र एकताको मधुर आवाज स्वतः गुञ्जिन्छ ।
पृथ्वीनारायणमा कृषि विकासको सपनासँग गाँसिएको ‘राम्रो जमिनको घर सारेर खेती गर्नुपर्ने’ नीति थियो । कति गर्विला विचार छन् उहाँका– स्वदेशी कपडा लगाउने सद्प्रेरणामा र अङ्ग्रेजको कालो नीतिको चर्को विरोधी भावमा, राष्ट्रिय स्वाधीनतामा, जडीबुटी बेचेर पैसा साट्ने विषयमा, खानी सदुपयोग गर्नेजस्ता आत्मनिर्भरताका दूरदर्शितासँग । त्यसो त परराष्ट्रनीतिको “नेपाल दुई ढुङ्गाबीचको तरुल हो” भन्ने उद्गार कूटनीतिक सचेतनाको दृष्टान्त हो । यसर्थ उहाँका गर्विला विचारहरूले आजका लागि अनुकरणीय, मननीय र व्यवहारमा प्रायोगिक बनाउन उत्तिकै सामथ्र्य राख्छन् । चतुरपनाको प्रखर भाव आज पनि कति सान्दर्भिक छ– किल्लालाई दह्रो बनाउने भावसँग, ‘जाइकटक नगर्नु झिकीकटक गर्नु’ भन्ने महावाणीसँग, ‘चीनको वादशाहसँग छाहा राख्नु दक्षिणको वादशाहसँग घाहा (घाउ) त राख्नु तर त्यो महाचतुर छ’ भन्ने उक्तिसँग । राज्य र सीमारक्षाका निम्ति सैनिक सुदृढीका पाटामा उहाँको विचार आजका लागि कम प्रेरणाप्रद लाग्दैनन् । ‘सैनिकलाई नुनको पछि नलगाउनु किनकि राजाको सार भनेको सिपाही र रैती हुन्’ यी विचारमा राज्यसेवाको भावना जागृत छन् । सुन्दर, शान्त नेपालका जन्मदाताको अमूल्य दिव्योपदेशले राष्ट्रिय एकता र समृद्धिको खम्बा गाड्देको छ । यस्ता युगपुरुषको यादमा हरेक सच्चा नेपालीले माथ झुकाउन जान्नुपर्छ ।